Ogadentoday Press » Digniin: Soomaalida waxaa laga rabbaa Midnimo ay isku difaacaan
Addis Ababa: Magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay Mudaaharad midkaas soo qaban qaabiyeen Qoomiyadda Oromada iyo qaar ka mid ah Axmaarada oo ku dhawaaqaya Dowlada Federaalka ah waa inay Cabdi soo qabtaan iyagoo sabab uga dhigay in Dad Itoobiyaan ah la laayay?
Dadkan Mudaaharaadaya kama aysan mudaaharaydin Soomaalida boqolaalanka ahaa ee Qoomiyaha Kalle laynayeen, kuwa hadda Magaalada Diridawa lagu laynayo! Itoobiyanimadda haddii ay tahay uun hal qoomiyad Iyo Labba Qoomiyaad waa in xaqiiqda la wajaho.
Soomaalida haddii ay dareen dhab ah isku qaadi waydo oo ay dhibaatadda lagu hayo ka dhiidhin wayso waa mid iyadaa ay ka shalayn doonto. mahan Dad shacab ah oo qoomiyad kalle ah in la dilo laakiin waa in xaqiiqda Iyo Runta la isku sheego oo kuwa dadkooda la layn aan ka hadlin laakin Intay Qoomiyadaha kalle u taqaan leh reer Hebal Iyo Koox hebal idin laynaysa aan iska qaban wayno